VaVictor Matemadanda Vanosungwa neMapurisa
Munyori mukuru musangano revaimbova varwi vehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, VaVictor Matemadanda, vakasungwa nemapurisa nemusi weChitatu.
VaMatemadanda vanonzi vakasungwa pavakaenda kunozvipira pakamba yemapurisa yeHarare Central mushure mekudaidzwa kwavakaitwa nemapurisa neMuvhuro svondo rino. Vanonzi vaenda kumapurisa vaine gweta ravo, vanonzi vabva vaiswa muhusungwa pavasvika pakamba iyi.
Gweta raVaMatemadanda, VaDouglas Coltart vati VaMatemadanda vapomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe pamwe nemapurisa pamwe nevose vanochengetedza runyararo.
VaColtart vati vari kutarisira kuti VaMatemadanda vachamiswa pamberi pedare mangwana kana kuti nemusi weChishanu.
Vatiwo mapurisa anga aine vhidhiyo inoratidza VaMatemadanda vachiti mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe vanofanira kusungwa sezvakamboitwa vamwe vatungamiri vesangano revakarwa hondo pavanonzi vakaburitsa gwaro raiti VaMugabe vachisiya basa vape matomhu kune mumwe munhu.
Mashoko akataurwa naVaMatemadanda pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare anotevera mashoko akataurwa naAmai Mugabe pamuzinda webato reZanu PF masvondo mashoma adarika ekuti VaMugabe vave kufanira kunongedza munhu wavachasiyira masimba.
Kusungwa kwaVaMatemadanda kwashorwa nemutauriri weMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaObert Gutu. Mashoko aVaGutu atsinhirwa nemunyori mukuru mubato reNational People’s Party rinotungamirirwa naAmai Mujuru, VaGift Nyandoro.
Mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika, Muzvare Linda Masarira vanoti kusungwa kwaVaMatemadanda kunotyora kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda muZimbabwe yakasununguka.
Mashoko aburitswa nemutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, VaDouglas Mahiya anoti VaMatemadanda vari kushungurudzwa nemhaka yekuti vari muchikwata cheZanu PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40 havasi kuda kuti vaive varwi muhondo yerusunguko vave nechekuita pakusarudzwa kwemunhu achatora matomhu kubva kunaVaMugabe.
Kunyange vakadzingwa muZanu PF, vatungamiri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vanofanirwa kuve nechekuita nekusarudzwa kwemunhu achatungamira nyika nekuti ndizvo zvimwe zvezvavakarwira zvekuti vasarudze munhu wavanoda kuti atungamire nyika.